प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न नबनाए मधेशी जनता चुप लागेर बस्दैनन्ः महासचिव साह
काठमाडौं, २४ साउन । संघीय समाजवादी फोरम नेपालका महासचिव राम साह यादवले अझैपनि मधेशलाई केन्द्रीकृत साशन व्यबस्थाको नजरबाट हेरिने गरेको दाबि गरेका छन् ।
नेपाली रेडियो नेटवर्क मार्फत प्रसारण हुने लोकप्रिय कार्यक्रम नेपाली वहसमा ऋषि धमलासँगको कुराकानिमा महासचिव यादवले यस्तो दाबि गरेका हुन ।
उनले भने,‘मुलुकको लागि मधेशी जनताले ठूलो त्याग र बलिदानि दिदै आए तर मधेश प्रति युगौदेखि राज्य सकारात्मक बन्न सकेन, आज आएर पनि अधिकार सम्पन्न प्रदेशको माग गरेका थियौं, संघीयतामा पनि मधेशलाई कम्जोर नजरले हेरियो, संविधान त्रुटिपूर्ण बन्यो, त्यसैले पनि प्रदेशले अधिकार सम्पन्न हुन पाएनन्।’
भक्ता खाने काम भयो तर जनताको काम भएन नि भनेर सोधिएको प्रश्नको जवाफमा उनले भने,‘त्यो गलत हो, हामीले जनता कै लागि राजनीति गरिरहेका छौं, मधेश आन्दोलत देखि आजसम्म पनि हामीले संविधान उचित किसिमको बनेन भनेका छौं, यसलाई परिमार्जित गरौं भनेका छौं, वर्तमान संविधानले मुलुकको उचित विकास गर्न सक्दैन भन्दै आएका छौं ।’
उनले अघि थपे,‘अधिकार सहितको प्रदेश नभएसम्म संघीयताको काम हुँदैन, पहिले र अहिलेमा कुनै फरक नहुने हो भने त्यो संघीयता किन चाहियो ? राज्यको नीतिनै मधेश प्रति बन्न सकेन ।’
सरकारका उप–प्रधानमन्त्री एवम् स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादवले मधेशी जनताको हितमा कुनै पनि काम गर्न सकेनन् नि ? भनेर सोधिएको प्रश्नको उत्तरमा उनले भने,‘हामीले वास्ता गरेनौं, ठिक छ कसले वास्ता गरेको छ र ?
यस्ता कुरा गरेर हुन्छ, हामीले नै मधेशी जनताको बारेमा चिन्ता गर्ने, मधेको विकासु प्रति चासो राख्ने, आजका दिनमा मधेशी जनतामाथि साशन गर्ने शोषण गर्नेहरु को हुन ?
संविधानलाई जनता पक्ष र प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाईएन भने मधेशी जनता चुप लागेर बस्दैन, हामीले सरकारलाई निरन्तर भन्दै आएको कुरा पनि यहि हो ।’